Black က Glass ကိုအခမဲ့ Next ကိုဖွင့်တင်အပြင်အဆင်ကို | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » Black က Glass ကိုအခမဲ့ Next ကိုဖွင့်တင်အပြင်အဆင်ကို
Black က Glass ကိုအခမဲ့ Next ကိုဖွင့်တင်အပြင်အဆင်ကို APK ကို
Black က Glass ကိုအခမဲ့ Next ကိုဖွင့်တင်အပြင်အဆင်ကို
Next ကိုဖွင့်တင်အပြင်အဆင်ကို BlackGlass APK ကို 7.1 သင့်ရဲ့ Android device ကိုများအတွက်အေးမြသောသစ်ကိုအနာဂတ်ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုအလွန်အံ့သြစေရန်အံ့သြဖွယ်နောက်ခံပုံများနှင့်အိုင်ကွန်များရှိပါတယ်။ သငျသညျကွီးစှာစှဲစေရန်သင့်ရဲ့ buddy နှင့်အတူဤဆောင်ပုဒ်မျှဝေနိုင်ပါသည်။ ဒီအပြင်အဆင်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။ အနာဂတ်ကာလ၌, developer များမှာလည်းသင့်ရဲ့ device ကိုအခြားအလားတူ app များကိုအကြံပြုလိမ့်မည်။ ဒီဆောင်ပုဒ်လျှောက်ထားရန်, သင်ပထမဦးဆုံးသင့်ရဲ့ device ကိုအပေါ် NEXT ကိုဖွင့်တင် APK ကို install လုပ်ရန်ရှိသည်။ သင်ဤ launcher ကို အသုံးပြု. 2D သို့မဟုတ် 3D mode မှာဒီဆောင်ပုဒ်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
အဘယ်ကြောင့် Black က Glass ကိုအခမဲ့ Next ကိုဖွင့်တင် Theme ကိုရွေးချယ်ပါ?
သင့်ရဲ့ device ကိုများအတွက် '' Glass ကို '' စတိုင် 11 HD ကိုနောက်ခံပုံများ။
အထူးဖန်အတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ 200 icon တွေကိုကျော်။
ဖန်ခွက်ပုံစံသီးသန့်ဒီဇိုင်းပြောင်းလဲဂရပ်ဖစ်ဒြပ်စင်၏ 99 ကျော်% ။
နှစ်ဦးစလုံး 2D နှင့် 3D Modes သာထောက်ခံခဲ့ကြသည်။
ဒီ app လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပြီးသင်ပင် delete သို့မဟုတ်ပြုပြင်မွမ်းမံ Appwiz ကနေထောက်ပံ့ပေးရှာဖွေရန်ပလက်ဖောင်းက BlackGlass မှဘာမှမဖြစ်ပေါ်စေမည်မဟုတ်နိုင်ပါ။
ယင်း၏အံ့သြဖွယ် features တွေအကြောင်းကိုသိရန်အပေါ် Read နှင့်မည်သို့ Android အတွက် Next ကိုဖွင့်တင်အပြင်အဆင်ကို BlackGrass APK ကို download လုပ်ပြီး install လုပ်ဖို့။
သင့်ရဲ့ device ကိုအပေါ်ကို default ဆောင်ပုဒ် launcher အဖြစ် Next ကို launcher ကို install လုပ်ပြီး
အောင်မြင်စွာဆောင်ပုဒ်ကို install ပြီးနောက် themes များ option ကိုသွားနေဖြင့် 2D / 3D mode ကိုအတူဆောင်ပုဒ် Apply ။
အဆိုပါနောက်ခံများ menu ကိုသင်တို့ကိုလည်းသတ်မှတ်နိုင်သည်အမျိုးမျိုးသောအေးမြပင်မမျက်နှာပြင်နောက်ခံပုံများပါဝင်သည်။
ဤတွင်သင့်ရဲ့ Android စမတ်ဖုန်းများအတွက်က Black Glass ကို Next ကိုအဓိကအကြောင်းအရာ APK ကိုသုံးစွဲဖို့မလိုအပ် device ကိုခွင့်ပြုချက်ဖြစ်ပါသည် -
ကွန်ယက်ကိုခြေစွပ်ဖို့ Access ကို
အိပ်ပျော်နေတဲ့ထံမှအလင်းမှိန်ခြင်းသို့မဟုတ် Processor ကိုကနေမျက်နှာပြင်အလင်းစောင့်ရှောက်
Black က Glass ကိုအခမဲ့ Next ကိုဖွင့်တင်အပြင်အဆင်ကို APK ကို Download လုပ်ပြီး Install လုပ်ဖို့ခြေလှမ်းများ -
ပထမဦးစွာသင်က Black Glass ကိုအခမဲ့ Next ကိုဖွင့်တင် Theme ၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်ရှိသည်။
ဆောင်ပုဒ်ကို download လုပ်ပါနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြုမိပါလိမ့်မည်တပ်ဆင်ရန်စက္ကန့်အနည်းငယ်စောင့်ပါ။
အန်းဒရွိုက်များအတွက် Next ကိုတင်ပေးသူက Black Glass ကိုဆောင်ပုဒ်ကို install ပြီးနောက်, APK ဖိုင်ဖွင့်လှစ်။
ဖုန်းရဲ့ Settings menu ကိုသွားပြီးအမည်မသိသတင်းရင်းမြစ်ကို enable ။
Black က Glass ကိုအခမဲ့ Next ကိုဖွင့်တင်အပြင်အဆင်ကို APK ကို Download လုပ်ပါ။
သင့်ရဲ့ device အတွက် Manager ကို File ကိုသွားပါနှင့်သင် download လုပ်ထားသော APK ဖိုင်ကိုရှာပါ။
အဆိုပါ APK ဖိုင်အပေါ်ကိုအသာပုတ်များနှင့်အတူတူပင်ထည့်သွင်းပါ။
ပြီးတာနဲ့ပြုသောအမှု, သင်ယခုကိရိယာပေါ်တွင်အနက်ရောင် Glass ကိုအခမဲ့ Next ကိုဖွင့်တင်ဆောင်ပုဒ်ကိုဖွင့်နိုင်ပါတယ်။
: အားဖြင့်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည် GAAAN.NET
ဤ Android များအတွက်အခမဲ့ App ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျအနာဂတျမှာပိုပြီးဆင်တူ app များကိုချင်တယ်ဆိုရင် Appwiz တစ်ဦးအားရှာဖွေခြင်းငွေရှာခြင်းအင်္ဂါရပ်ရှိပါတယ်။ ဒါဟာအောက်ပါ options များပူဇော်ပါလိမ့်မယ် -
ဒါဟာ app တစ်ခုအပေါ်တစ်စုံတစ်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်မဟုတ်ပါလိမ့်မယ်
ဒါကြောင့်သင်ဟာ android များအတွက် Next ကိုဖွင့်တင်အပြင်အဆင်ကို, က Black Glass ကိုသုံးစွဲဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပြီ။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ Android device ကိုမှအေးမြသက်ရောက်မှု add နှင့်၎င်း၏ display ကိုပိုမိုဆွဲဆောင်ခြင်းနှင့်ဆွဲဆောင်မှုကိုလုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးဆောင်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအဲဒီလိုလုပ်ဖို့, HD နောက်ခံပုံများနှင့်လှပသော icon များရှိပါတယ်။
Black က Glass ကိုအခမဲ့ Next ကိုဖွင့်တင်အပြင်အဆင်ကို Next ကိုဖွင့်တင်အပြင်အဆင်ကို
မတ်လ 18, 2016 မှာ 8: 24 ညနေ
ငါမကျင့်ဒီဆောင်ပုဒ်ကိုရှာဖွေနေ။ သေးနာမကိုသိဖုန်းမှာမှုတ်ခြင်းဖြင့် icon များသို့မဟုတ် app များကိုရွှေ့နိုင်ဟာ android များအတွက် 3G ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်ပါသည်
အာဗေလ musosha says:
နိုဝင်ဘာလ 24, 2015 မှာ 2: 15 နံနက်
အဆိုပါ app များကိုဿုံနှင့်အံ့သြလောက်အောင်ဤဝက်ဘ်ကျောက်ဆောင်အလုပ်လုပ်